NgoDisemba 2020-Funda ukurhweba
31 Disemba 2020 | Ukuhlaziywa: 31 Disemba 2020
I-EUR / GBP ikwiDowntrend, ukuLulwa kobuso kwinqanaba le-0.9100
Iponti ngoku iyehla ngokuhla. Esi sibini ngaphambili besenza ukulungiswa xa saliwe kwinqanaba le-0.91000. Ukwehla kuya kufikelela kwinqanaba eliphantsi kwinqanaba le-0.8880.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ngokuthe tye. Iibini zikwinqanaba lama-43 leSalathiso samandla esiNxulumeneyo sexesha lesi-14.Ipawundi ingezantsi komgca osembindini wama-50 kwaye ikummandla wedowntrend.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini se-EUR / GBP sisezantsi. NgoDisemba i-31 yehla; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Oku kubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba iponti iya kuwela kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci. Owona mgangatho usezantsi ngu-0.8906.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ziyehla ezantsi. Iibini zingaphezulu kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba iponti ikwi-bearish umfutho. Ikwasondela nakummandla ogqithileyo
Iphawundi iphinde yaqala ngokuhla. Umkhwa opheleleyo kukuhamba ecaleni. Ngokwesixhobo seFibonacci, intengiso iya kuwa kwinqanaba le-0.8906.
I-AUD / JPY ifikelele kuMmandla oThengisiweyo, abaThengisi banokuthi bavele
Inqanaba lenkxaso engundoqoImigangatho:
Esi sibini ngoku sihambela phezulu. Ixabiso liphule ukumelana kwinqanaba lama-78.00. Nge-17 kaDisemba ngo-uptrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci engama-61.8%. Oku kubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba isibini sinokunyuka kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci. Ngumphakamo ongama-80.26.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonisa ukunyuka okuthe kratya. Iibini zikhuphuke zaya kwinqanaba lama-72 leNdawo yokuDityaniswa kwaMandla aNxulumene naMandla ixesha lesi-14. Oku kubonisa ukuba iYen ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Esi sibini sifikelele kummandla weentengiso ogqithisileyo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini esi sihambela phezulu. Esi sibini sinyukele kwinqanaba le-89.69. Imarike kungekudala iza kufikelela kummandla weentengiso ogqithisileyo. Ukunyuswa okwangoku kungapheliswa.
Isibini se-AUD / JPY okwangoku singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho wokuqhubela phambili. Intengiso ifikelele kummandla othengiweyo wentengiso. Kukho amathuba okuba abathengisi abasakhulayo kwingingqi ethengwe kakhulu.
Isibini se-AUD / JPY sikwisantya esiphakamileyo. Izikhombisi zikhomba imeko egqithisileyo yesibini. Abathengisi banokuvela batyhalele amaxabiso ezantsi.
Ingxaki ye-SEC vs XRP: Yonke into ekufuneka uyazi
31 Disemba 2020 | Ukuhlaziywa: 1 January 2021
Iintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ibe ngamava akhathaza kakhulu iRipple (XRP), ethe yabona ukuba i-cryptocurrency yesithathu ngobukhulu ichebe kufutshane nama-60% kwixabiso layo. Izinto ziye zangqubeka kwi-cryptocurrency kulandela isigwebo esandula ukwenziwa yi-SEC.
Kule nqaku, siza kuthatha i-dive enzulu kwi-SEC yokugweba i-XRP, uhlobo lwe-XRP, kunye neempendulo zexabiso kunye nokuqikelela malunga nokuhlaselwa komthetho.
I-SEC ye-Cryptocur lwemali enxulumene namatyala e-2020
I-US Securities and Exchange Commission (i-US SEC) ibinzima kwii-cryptocurrencies kulo nyaka. Kwangoko kulo nyaka (ngamanye amaxesha ngo-Matshi), iKhomishini iphumelele isigunyaziso kwihlabathi liphela ngokuchasene nokukhutshwa kweTelegram (GRAM), egqiba iminyaka eliqela yophando kunye nenkqubela phambili, nokuba akukho zityholo zobuqhetseba.
Kwakhona ngo-Septemba, iJaji u-Alvin K. Hellerstein uthathe isigqibo esivumelana nesindululo se-SEC sokugweba ngesishwankathelo kwi-SEC ngokuchasene ne-Kik Interactive. Isindululo sityhola ukuba i-Kik ithengise izibambiso ezingabhaliswanga xa ikhupha iithokheni zayo zeKin crypto. Omabini la matyala (ngokuchasene neTelegram kunye neKik) afakwa kwiSithili seZantsi saseNew York.
Ukukhawuleza ukuya ku-Disemba 22, i-SEC igqibe kwelokuba iye kwelinye ityala elinomgangatho ophezulu. IKomishini ifake isimangalo sayo kwisithili esichazwe apha ngasentla ngokuchasene neRipple Labs kunye namagosa aziiNtloko zeGosa eliPhezulu (i-CEO), uChristian Larsen kunye noBradly Garlinghouse, ngokwahlukeneyo, ngokunyusa malunga ne-1.38 yezigidigidi zeerandi ngokuthengisa i-XRP ukusukela ngo-2013.
Ukusebenza kwangoko kweli tyala kwaba bubundlobongela kwi-XRP, eye yehla malunga neepesenti ezingama-25 nje kwiiyure ezingama-24 emva kokuba kufakwe isimangalo.
IKhomishini yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano ibhengeze nge-22 kaDisemba ukuba ifake inyathelo ngokuchasene neRipple Labs kunye nezimbini zayo, abathi iKomishini ibabona njengabanini bezokhuseleko, ngenxa yokutyhola imali engaphezulu kwe-1.3 yezigidigidi zeerandi ngokusebenzisa ubhaliso lweeasethi zedijithali ezingabhaliswanga. .
Ngokwesikhalazo se-SEC, uRipple; UChristian Larsen, umsunguli wenkampani, usihlalo olawulayo webhodi yayo, kunye nalowo wayesakuba yi-CEO; kunye noBradley Garlinghouse, i-CEO yangoku yenkampani, imali eyabelwa ngabantu ukuba ixhase ukusebenza kwefemu. Isimangalo sityhola ukuba umsebenzi kaRipple wokubuyisa isihlwele waqala ngo-2013, ukususela ekuthengisweni kweXRP kwimirhumo yezokhuseleko engabhaliswanga kubatyali zimali baseMelika nakwilizwe liphela. Isikhalazo sikwaxela ukuba iRipple isasaze iibhiliyoni ze-XRP ngokungqwalaselwa kwemali, njengokusebenza kunye nokwenza intengiso.
Isuti ikwatyhola ngelithi ukongeza kuphuhliso, ukukhuthaza, kunye nokuthengisa i-XRP esetyenziselwa ukuxhasa ngemali ukusebenza kwayo, uLarsen kunye noGarlinghouse benze intengiso ye-XRP, ebiza malunga ne-600 yezigidi zeedola. Isikhalazo sityhola ukuba abatyholwa basilele ekufezekiseni iimfuno zobhaliso ngokwemiqathango yobhaliso lwemithetho yezokhuseleko yomdibaniso, ebabeka kwimeko enokubekwa ityala.
UStephanie Avakian, uMlawuli weCandelo loNyanzeliso lwe-SEC, uqaphele ukuba "abanikezeli abafuna isibonelelo sombonelelo esidlangalaleni, kubandakanya ukufikelela kubatyali zimali zentengiso, ukuhanjiswa ngokubanzi kunye nentengiso yesibini, kufuneka ithobele imithetho yezokhuseleko yaseburhulumenteni efuna ukubhaliswa kweminikelo ngaphandle kokuba kusebenza uxolelo kubhaliso. ” Uye wongeza ukuba "sityhola ukuba iRipple, uLarsen, kunye neGarlinghouse basilele ukubhalisa isithembiso sabo esiqhubekayo kunye nokuthengiswa kwezigidigidi zeXRP kubathengisi abathengisa, abathe bathintela abathengi abanokubhengeza ngokufanelekileyo malunga neXRP kunye neshishini likaRipple kunye nezinye izinto ezibalulekileyo zibalulekile kwinkqubo yethu yentengiso yoluntu. ”
Isikhalazo se-SEC safakwa kwabatyholwa ngesityholo sokuphula umthetho wobhaliso ngokwe-Securities Act ye-1933. Uphando lwenziwa nguDaphna A. Waxman, uJon A. Daniels, noJohn O. Enright weCyber ​​Unit ye-SEC. Ityala elo ligadwe nguKristina Littman, oyiNtloko yeCandelo leCyber ​​Enforcing Division. Okokugqibela, ukumangalelwa kwaququzelelwa nguJorge G. Tenreiro, Dugan Bliss, UNks Waxman, kunye noMnu Daniels, kwaye babebekwe esweni ngu-Preethi Krishnamurthy.
Imbali emfutshane yeRipple kunye neXRP
Uluvo olungemva kweXRP lwaphuhliswa kwangoko ekuqaleni kuka-2012, emva koko inkampani yalitshintsha igama laba nguRipple. I-XRP Ledger-okanye enye into eyaziwa njengekhowudi yesoftware-isebenza njengeziko ledatha elilingana neontanga elisasazeka kuthungelwano lweekhompyuter (iindawo), ezinikwe uxwebhu lokurekhoda malunga nokuthengiselana phakathi kwezinye iimfuno. Ukufumana imvumelwano, iserver nganye kwinethiwekhi ivavanya yonke intengiselwano evela kwiseti yeendawo ezithembakeleyo, ukuthintela ukuthengiselana ngobuqhetseba. Iindawo ezithembakeleyo zaziwa njengeendawo ezikhethekileyo zeseva ezilahlekileyo okanye i-UNL.
Kwinethiwekhi ye-XRP, iserver nganye inenkululeko yokuchaza iindawo zayo ezithembakeleyo. Nangona kunjalo, i-XRP Ledger ifuna inqanaba elisempilweni leendawo zokuthenjwa ezikhethiweyo ezikhethwe yiseva nganye. Ukufezekisa oku, uRipple wenza i-UNL ecetywayo esidlangalaleni.
Emva kokuba i-XRP Ledger igqityiwe ekugqibeleni kwaye njengoko yayithunyelwa kwiiseva ezichongiweyo ukuba ziqhube ngoDisemba 2012, kanye kwiminyaka esibhozo eyadlulayo, unikezelo olumiselweyo lwe-100 yezigidigidi ze-XRP lwasekwa lwenziwa ngexabiso eliphantsi kakhulu. Emva kokudalwa, iithokheni ezingama-80 zeebhiliyoni ze-XRP zatshintshelwa eRipple, inkampani eyayibambe iindwendwe, ngelixa iithokheni eziseleyo ezingama-20 zatshintshelwa kubasunguli, kubandakanya uLarsen. Oku kuthetha ukuba i-Ripple kunye nabasunguli bayo balawula yonke i-XRP ekhoyo ngelo xesha.
Ezi zigqibo kwathiwa zenziwe njengolungelelwaniso phakathi kwenethiwekhi yoontanga eyahlulelwe yiBitcoin (BTC) kunye nenethiwekhi esembindini ngokupheleleyo nomlamli othembekileyo, njengeziko lemali lesiko. Oko kwathiwa, iBitcoin ayikaze yenziwe ukuba iqhutywe ngendlela esembindini, ngelixa i-XRP yayiyilelwe ukuba ibe yileya ithathela ingqalelo ukuhanjiswa kwethokheni yokuqala. Le ndlela ye-hybride kwi-blockchain esekwe kwimpahla yedijithali, eyayilawulwa ngumbutho ophakathi, yabangela ukungazinzi kuluntu lwe-cryptocurrency, uninzi lwabathandi be-crypto besithi i-XRP yayingeyiyo eyokwenyani "eyinyani".
Ngokwe-SEC, phakathi kuka-2013 no-2014, i-Ripple kunye nabasunguli bayo bafuna ukwenza imarike ye-XRP ngokufuna ukuba i-Ripple isasaze malunga ne-12.5 yezigidigidi ze-XRP ngeenkqubo zokuzonwabisa, ezazibonelela ukuba abaphathi bafumana iinkqubo zokuxela iibhugs kwikhowudi ye-XRP Ledger. Ukuqhubela phambili ukonyusa ukujikeleza kunye nokwenza intengiso yorhwebo yeXRP, iRipple isasaze inani elincinci lamathokheni — ngesiqhelo phakathi kwe-100 kunye ne-1,000 XRP ngentengiselwano nganye- kubaphuhlisi abangaziwayo nabanye.
Emva koko, i-Ripple yenze amanyathelo acwangcisiweyo ukonyusa ibango lokuqikelela kunye nevolumu yokuthengisa yeXRP. Ngo-2015, uRipple waqala umkhankaso wokwenza i-XRP "i-asethi yedijithali yendalo yonke" kwiibhanki kunye namanye amaziko emali emveli ukuqhuba ukuhanjiswa kwemali. Ngokwe-SEC, ukwenza oku, i-Ripple kufuneka ukuba yenze intengiso esebenzayo ye-XRP yorhwebo lwesibini. Oku kuthetha ukuba iRiple yandise iinzame zayo zokwenza ukusetyenziswa kweXRP ngelixa isonyusa ukuthengiswa kwemali ye-cryptocurrency kwintengiso.
Okwangoku iRipple Labs, kunye nenkxaso-mali yayo yeXRP II LLC, iphantsi kophando yi-US Financial Crimes Enforcing Network (FinCEN), isebenza ngokomyalelo wayo kwi-Bank Secrecy Act (BSA). Isithili saseMantla eCalifornia, sidibene neOfisi yegqwetha laseMelika, sahlawulisa zombini ezi nkampani ngokungaphumeleli ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zeBSA, kubandakanya nokungabhalisi neFinCEN nokusilela ekugcinweni ngokungekho semthethweni nge-Anti-Money Laundering (AML) kunye noLwazi uMthengi wakho ( KYC) iiprotocol. I-FinCEN iqinisekisile ukuba ukusilela kukaRipples ekuthobeleni iimfuno kwavula umnyango wokuba abanqolobi kunye nabathengisi bemali basebenzise i-XRP ngolunya.
Nangona kunjalo, eli tyala alikhange lenze ukuba lixoxwe, njengoko iRipple Labs ivumile ukuhlawula ityala ngokuhlawula isohlwayo se- $ 700,000 kunye nokuhlaziya ukusebenza kwenkampani ukufezekisa imigangatho ye-BSA efunekayo. Isivumelwano sangaphandle kwenkundla sabhengezwa nge-5 kaMeyi ngo-2015. Ngalo lonke uphando lwayo, i-FinCEN igcine ukuba i-XRP yimali yedijithali, eyamkelwa nguRipple kwaye sele ihlaziya iinkqubo zayo ukuhlangabezana neemfuno ze-BSA.
Isikhalazo se-SEC siqaphele ukuba ukusukela ngo-2014 ukuya kwikota yesithathu yowama-2020, iRipple ithengise ubuncinci i-8.8 yezigidigidi ze-XRP kwintengiso nakwintengiso yeziko, ibiza malunga ne-1.38 yezigidigidi zeedola ukuxhasa imisebenzi yayo. Ukongeza, isikhalazo satsho ukuba ukusukela ngo-2015 ukuya ngoMatshi 2020, ngelixa wayengu-CEO kwaye kamva engusihlalo webhodi eRipple, uLarsen kunye nenkosikazi yakhe, uLyna Lam, bathengisa ngaphezulu kwe-1.7 yezigidigidi zeXRP kubatyali mali bakarhulumente kwimakethi ye-cryptocurrency.
Esi sibini sixelwe ukuba senze ubuncinci i-450 yezigidi zeerandi kwintengiso. Ngeli xesha, ukusukela ngo-Epreli 2017 ukuya ku-Disemba ka-2019, ngelixa wayengu-CEO we-Ripple, uGarlinghouse wathengisa ngaphezulu kwe-321 yezigidi ze-XRP awayeyifumene kwi-Ripple ukuya kubatyali-zimali bakarhulumente kwimakethi ye-cryptocurrency, efumana malunga ne- $ 150 yezigidi kwintengiso.
Utshintshiselwano luqala ukuhambisa iXRP
Ukulandela isimangalo esibi ngokuchasene ne-cryptocurrency giant, uninzi lotshintshiselwano sele luqalile ukungadwelisi okanye ukumisa urhwebo lweXRP kumaqonga abo. I-Coinbase yayilutshintshiselwano lwamva nje lokuziqhelanisa ne-XRP njengoko isuti itsala.
I-Coinbase idwelise i-XRP kumaqonga ayo ajonge ukuthengisa ngoFebruwari 2019. Nangona kunjalo, uCoinbase ubhengeze ukuba imali ye-cryptocurrency ngoku ihanjiselwe kwicandelo "lomda kuphela" okwangoku kwaye iya kumiswa ngokupheleleyo ngoJanuwari 19, 2021. UPaul Grewal, oyiNtloko Igosa lezomthetho eCoinbase, ubhale ngeposi ukuba "sizakuqhubeka nokujonga inkqubela phambili yezomthetho enxulumene neXRP kwaye sihlaziye abathengi bethu njengoko ulwazi oluninzi lukhona."
Okwangoku, utshintshiselwano luqinisekisile ukuba ii-wallet ze-XRP zabasebenzisi ziya kuba nakho ukufumana iimali kwaye zenze lula ukurhoxa nasemva kokumiswa ngokupheleleyo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, uCoinbase uqinisekisile ukuba iqonga layo liza kuxhasa i-airdrop ezayo yeethokheni zeSpark kubaphathi beXRP. Oko kwathethi, i-XRP iya kuhlala ixhaswe yi-Coinbase Custody nakwi-Coinbase Wallet yokuzenzela.
Ixabiso le-XRP kwi-Coinbase laphazanyiswa ukusuka kwi-0.24 yeedola kwimizuzu yokuqala engama-20 yesibhengezo esenziwe ngo-Disemba 28. Emva koko, i-cryptocurrency icime ngaphezulu kwe-60% kuqikelelo lwayo ukusukela oko umthetho we-SEC wabhengezwa kwiveki ephelileyo.
UCoinbase uqaphele ukuba isizathu sokulahla i-XRP njengempahla ethengiswayo kwiqonga labo kungenxa yokuba, njengoko iRiple yayifuna i-IPO, ukuba liqonga eligcina into enikezela ukhuseleko-okanye elinokubakho- lingafuna uhlaziyo kunye nokongeza iphepha yenze kube semthethweni ukuba abathengisi bathengise.
I-Coinbase lolona tshintshiselwano lukhulu lwe-imali yedatha yokuqhawula ubudlelwane kunye ne-XRP kulandela isigwebo se-SEC. Olu phuhliso lunokubangela amanyathelo afanayo phakathi kolunye utshintshiselwano nge-imali yedatha.
IBitstamp kunye ne-OKCoin babhengeze ngaphambili ukuba bayarhoxisa urhwebo lwe-XRP kunye needipozithi zabo bonke abathengi base-US ngomhla we-8 nowe-4 kaJanuwari ngokwahlukeneyo.
Utshintshiselwano oluqhubeka nokunikezela nge-XRP ngaphandle kokubhalisa njengotshintshiselwano ngezokhuseleko kunye nomngcipheko we-SEC osebenza kwiingxaki nabasemagunyeni. Nangona kunjalo, ukuba iRipple iyaphumelela kweli tyala okanye ibaleke ngesohlwayo esincinci, iCoinbase kunye nolunye utshintsho olunokuthi luphindwe ludwelise iXRP ngokukhawuleza.
U-Alex Kruger, umrhwebi / umhlalutyi we-cryptocurrency, ukubeka ngokucacileyo esithi "ukutshintshiselana nge-crypto akubhaliswanga kwi-SEC (ngokuzikhethela, njengokubhalisa kuthwala imithwalo emininzi kunye neendleko ezongeziweyo) kwaye ke oko kuyinjongo yabo ukunganikeli urhwebo ngokhuseleko. Kukhusela bona, hayi abathengi babo. ”
UGabriel Shapiro, igqwetha elinoBelcher, uSmolen noVan Loo LLP, uthe kudliwanondlebe lwakutsha nje ukuba isigqibo sokurhoxisa iXRP ngotshintshiselwano sinzima, kuthathelwa ingqalelo iimpembelelo zemali nezomthetho.
Nangona ukungahambi kakuhle kubonakala kunzima, siyakholelwa ukuba akukho sizathu sokwethuka okwangoku. Kukho ithuba apha. Ukutshintshiselana okusekwe e-US okususa i-XRP kwakulindelekile, kuthathelwa ingqalelo ukuba banembopheleleko yolawulo lokuthobela i-SEC. Olu tshintshiselwano lwenza ngenxa yezizathu zokhuseleko.
NgoDisemba, i-Japan ibhengeze ukuba i-XRP ayithathwa njengesiqinisekiso sokhuseleko. I-UK yenza isibhengezo esifanayo kwangoko.
Oko kwathethi, siyakholelwa ukuba le probe ye-SEC yeyokwexeshana kwaye iRipple iyakuthi ekugqibeleni ihlawuliswe ubukhulu becala. Ityala likholelwa ekubeni linomgangatho ophantsi, kuthathelwa ingqalelo ukuba i-SEC ayikhange ilinganise i-XRP njengokhuseleko olunika iminyaka ethile. Nangona kunjalo, ixabiso leXRP liza kuchaphazeleka ngokungathandabuzekiyo xa utshintsho oluninzi olusekwe e-US luyekisa okwethutyana i-cryptocurrency, kodwa silindele ukubuyiswa ngokupheleleyo kunyaka ozayo xa konke kudlula.
Oko bekuthethile, “kukho igazi ezitratweni” kwaye okwangoku lixesha elifanelekileyo lokuzibeka kwinqanaba lokufumana inzuzo kwimeko. Nangona kunjalo, asinakutsho ngokuqinisekileyo ukuba ukuhla kuya kude kangakanani, kodwa kukho ithuba apha ngokuqinisekileyo. Njengesiqhelo, besifuna ukuzisa iindaba kuwe (abafundi bethu) njengoko siqhele ukwenza xa sibona ithuba elifanelekileyo lokurhweba.
Uhlalutyo lwamaxabiso eXRP / USD
Ngexesha lokushicilela, i-XRP ngoku ihleli nzulu ngaphakathi kwendawo engaphezulu-ngokusekwe kwisalathiso seyure ye-4 ye-MACD. Ngelixa ii-swings zasendle ziqhelekile kurhwebo lwe-cryptocur lwemali, iindlela eziqhubekekayo ziya kubuyela umva ngokuphawulekayo. I-Ripple okwangoku iphantsi -30% ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo.
Idatha yabarhwebi abathengisayo ibonisa ukuba malunga neepesenti ezingama-94 zabarhwebi zizonke, kwaye umlinganiso wabarhwebi ixesha elide ukuya kuma ngokufutshane kwi-17.3 ukuya kwi-1. Nangona kunjalo, inani labarhwebi ixesha elide lingama-5% ngaphantsi kweentsuku ezimbini ezidlulileyo kunye ne-2.8% ezantsi ukusukela kwiveki ephelileyo, ngelixa inani le-net-elifutshane lenyuke ngama-53% kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo kunye nama-36% aphezulu kwiveki ephelileyo. Oku kubonisa ukuba abathengisi abaphantsi komnatha kuneentsuku ezimbini ezidlulileyo xa kuthelekiswa neveki ephelileyo.
Nangona kunjalo, utshintsho lwamva nje kwiimvakalelo zorhwebo zibonisa ukuba imeko yeXRP yangoku inokubona ukubuyela umva ngokukhawuleza ngokukhawuleza.
Okwangoku, ukungazinzi okungalunganga kweXRP kwaqala xa iindaba malunga nethokheni yethokheni yeSpark yaqala ukusasazeka phakathi kwabarhwebi. I-rally ebangelwe sisibhengezo ibangele ukuba i-cryptocurrency ithathe uluhlu lwayo lokurhweba lweminyaka emininzi phakathi kwe- $ 0.20 kunye ne- $ 0.30 kwaye iqhubeke isondele kwi- $ 0.90 ngapha nangapha kunaniselwano oluninzi.
Okwangoku, abathengisi baqala ukubeka umdla kwi-crypto, eyanceda ukuba izinze malunga ne-0.60 yeedola. Nangona kunjalo, iindaba malunga nokugwetywa kwe-SEC ngokuchasene neRipple zaqhekeka zaza zathumela i-cryptocurrency yesithathu ngobukhulu kwithontsi elibukhali kwingingqi ye- $ 0.20 kwakhona, apho yafumana imfuno entsha kwakhona. Ke iindaba zokunqumamisa urhwebo lwe-XRP kwi-Coinbase kwiveki ezayo zenze ukuba kuthengiswe okutsha, okuthathe ixabiso ngokufutshane ngaphantsi kwenkxaso ebalulekileyo ye- $ 0.20.
Oko kwathiwa, abalindeli balindele ukuhla okwexeshana kufutshane nekota, bekhankanya ngakumbi ukurhoxiswa kotshintshiselwano kunye nokudityaniswa kokungabinamali njengezona zinto zibalulekileyo. Sele ezinye iinkampani ezinkulu ezenza imarike ezisebenze neRipple sele ziqalisile ukusika ubudlelwane kunye nenkampani, ebonisa ukuba ukuthengiswa kwemali kuya kuzika ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, ngexesha lokushicilela, imakethi ye-XRP ibone ukubuyiswa okunempilo ukusuka kuthengiso lwayo lwamva nje ukusuka kwiidola eziyi-0.17 ukuya kwindawo eyi- $ 0.21. Oku kubuyela umva kubonisa ukukhama okufutshane, nangona kungenakuhlala ixesha elide. Uxinzelelo olunzima lokuthengisa lunokubonwa kwinqanaba leedola le-0.24, elibonakala liyinto enkulu ekukhuleni kweXRP.
Ngaphaya koko, omnye umhlalutyi upeyinte umfanekiso odakisayo weXRP kwiiveki ezizayo, njengoko esenza uqikelelo lwamaxabiso phakathi kwe- $ 0.07 ukuya kwi- $ 0.12. Uye waphawula ukuba olunye utshintsho olwenziweyo, ukunqongophala kwemali, kunye nokuphuma kweminenga kuya kuqhubeka ukubeka uxinzelelo kwixabiso leXRP. wathi "XRP: I-IMO uthuli luza kuhlala kwezi veki / iinyanga zimbalwa zizayo kwindawo ethile phakathi .07-.12c. Ubutywala buya koma. I-ODL ayinakusetyenziswa kwiBitstamp. Olunye utshintsho luya kumisa urhwebo. Abadlali abakhulu baya kuqhubeka nokuzikhupha emngciphekweni kwaye balahle uluhlu lweempahla. Ndibona ngale ndlela. ”
Nangona kunjalo, iintsuku ezizayo kufuneka zenze izinto zicace kumkhombandlela olandelayo we-XRP, ugcine iziphumo zolu xhaso lufutshane.
tags Ripples, sec, IKomishoni yoTywala kunye noTshintshiso, XRP, XRPUSD
I-AUDUSD izuza ukuTsalwa kosuku lwe-3 kumqolo, kufutshane neNqanaba le-0.7750 phakathi kokuThengisa kwe-USD okuqhubekayo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-nge-31 kaDisemba
I-AUDUSD iqhubeke i-rally yayo yaza yabetha i-0.7742, elona nqanaba liphezulu phantse kwiminyaka emi-3, ekuqaleni kweseshoni yangoLwesine. Isiseko seemvakalelo zentengiso kwiimalike zamashishini ezemali zamashishini ezingenanzala emisiweyo zaqhubeka nokujongela phantsi idola ekhuselekileyo.
Amanqanaba okumelana: 0.8136, 0.8000,0.7800
Amanqanaba enkxaso: 0.7635, 0.7571, 0.7414
Kwindlela yexesha elide, ukwehla ngokubanzi okuvela kwi-1.1079 (phezulu) kunokuba kuphele ngo-0.5506 (ezantsi). Ukurhweba ngokuqinileyo ngaphezulu kwe-38.2% yokubuyisa ukusuka kwi-1.1079 ukuya kwi-0.5506 kwi-0.7635 ingaqinisekisa le meko inamandla. Ukuqhubela phambili ukusuka kwi-0.5506 kunokuba kukuqalisa kwakhona kwexesha elide okanye kwirali yokulungisa.
Impendulo kwinqanaba eliphambili lokumelana ne-0.8135 iya kutyhila imeko enjalo. Inkxaso kulindeleke ukuba ibe kwi-0.7414, eyona nto iphambili iphindwe kabini ilandele ikepusi ye-AUDUSD ngasekupheleni kuka-2018 kunye nokuhlangana ngo-2020, de kube kukuqhawuka kwamva nje. Inqanaba elilandelayo lokujonga i-0.70, kwaye inani elijikelezileyo elinikezelweyo lisebenze njengezantsi kabini ngaphambi kokuba kuqhume kade.
Ukuqhawuka kwenqanaba lokumelana ne-0.7635 ye-AUDUSD kubonisa ukuqala kwakhona kokuphakama. I-intraday bias ngoku iyaphakama kwakhona. Ukunyuka okuvela kwi-0.5506 kufanele kujolise kwi-61.8% ye-0.5506 ukuya kwi-0.7414 ukusuka kwi-0.70 ukuya kwi-0.8170 elandelayo. Kwelinye icala, ikhefu le-0.7461 lenkxaso liyafuneka ukuqinisekisa umphezulu wexesha elifutshane.
Nangona kunjalo, kwimeko yokubuyela umva, imeko inokuhlala inyusa. Ubuthathaka bedola xa iyonke bomeleza imeko "yokwazisa" kwesi sibini. Ngexesha elifutshane, umngcipheko uhlala ucalucalanye usiya phezulu kwitshathi yeeyure ezi-4 ngaphandle kokufunda okungaphezulu. Elinye inyathelo elingasentla kufuneka kulindeleke kwikhefu elingaphezulu kwe-0.7800, elona nqanaba likufutshane lokumelana.
Ukuhamba phambili kweBullish Sentiment Encircles EURUSD kwiminyaka yokuphela ukuya kwinqanaba le-1.2300
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-nge-31 kaDisemba
Abathengi be-EURUSD babuyela kwindawo eyi-1.2300 ekuqaleni kosuku lokugqibela luka-2020, nangona kunjalo, ngenxa yokungabikho kwayo nayiphi na into entsha esisiseko, abathengi bathathe ikhefu elifutshane kwaye bayekile ukuphakama phakathi kwexabiso eliphantsi lokurhweba ekupheleni unyaka. I-EURUSD ijikeleza i-1.2285, ngelixa iindawo eziphakamileyo zisabonakala.
Amanqanaba okumelana: 1.2554, 1.2413, 1.2325
Amanqanaba enkxaso: 1.2150, 1.2100, 1.2040
Ngokobuchwephesha, esi sibini siqinisekisile ngekhefu elitsha le-bullish yomgca oxhathisayo kwi-1.2272 kwaye kujongeka ngathi kukonyusa indlela yayo yangoku. Nangona kunjalo, i-RSI yemihla ngemihla isecaleni lokophula indawo ethengiweyo kwaye ifuna ulumkiso kubarhwebi abanolunya lwe-bullish.
Kwelinye icala, nakuphi na ukubuyela umva okubonakalayo kunokubonwa njengethuba lokuthenga kwaye kuhlala kufakwe kwinqanaba le-1.2150 yenkxaso ethe tyaba. Isibini sinokuthi emva koko sibe sesichengeni sekhefu elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le-1.2042 kwaye sikhawulezise isilayidi sokulungisa esiya kwindawo yokuhlangana yomthengi we-1.1620.
Ukuqhekeka kwe-EURUSD kwi-1.2272 yosuku oludlulileyo lokuchasana nenkxaso kulungiso lokuphinda uqalise kwaye nakuphi na ukuwa lithuba leenkomo. Ukhetho lwangaphakathi lwangaphakathi lwaqala ukunyuka kwakhona. Ukuqhubela phambili ukusuka kwi-1.0635 kufanele ngoku kujolise kwi-61.8% ye-1.0635 ukuya kwi-1.2011 ukusuka kwi-1.1602 kwinqanaba elilandelayo le-1.2452.
Kwelinye icala, ikhefu lenqanaba lenkxaso le-1.2150 liyafuneka ukumakisha incopho yexesha elifutshane. Nangona kunjalo, imeko yexesha elifutshane inokuhlala ikwimeko entle kwimeko yokubuyela umva. Nangona kunjalo, ukurhweba okuzinzileyo ngaphandle kwenqanaba elikufutshane le-1.2272 kunye nomndilili we-13 ohambahambayo unika abathengi be-EURUSD ithemba lokuba bazakubukela umgca ophakamileyo ukusuka esiphelweni sika-Novemba.
IMALI (BNBUSD) Ixabiso: Ngaba abathengi banokuthi bakhusele inqanaba lenkxaso kwi $ 37?
Kwimeko apho abathengisi babenako ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 37 kunye nesibane sezibane zemihla ngemihla ezingaphantsi kwenqanaba, ixabiso lingehla ngakumbi ukuvavanya i-31 kunye ne-27 yenqanaba lenkxaso. Ukungakwazi ukophula inqanaba lenkxaso ye- $ 37, imeko yokuqhubela phambili inokuqhubeka nokujolisa kwinqanaba lokumelana ne- $ 41, $ 44 kunye ne- $ 48.
Intengiso yeGBP / JPY
Amanqanaba okubonelela: $ 41, $ 44, $ 48
Amanqanaba emfuno: $ 37, $ 31, $ 27
I-BNBUSD yexesha elide: Bullish
I-BNBUSD inyanzeliswa kwimbono yexesha elide. Ingqekembe yaqhuma kumda oqala ngoDisemba 19. Iinkunzi zeenkomo zafumana amandla ngakumbi kwaye zanyusa ingqekembe ukuya kufikelela kwi-37 yeedola ephezulu ngoDisemba 20. Ukuchasana kwinqanaba elichazwe apha kuthintele ukunyuka okuthe kratya kwexabiso kunye nexabiso elibuyiselwe kwi $ 31 inqanaba lenkxaso. Iibhere azinakukwazi ukugcina uxinzelelo, ixabiso laxhamla kwaye inqanaba lama-37 leedola langena kwaye ixabiso lafikelela kwinqanaba lama- $ 41 izolo. Umfutho we-bearish uvule intengiso namhlanje ngokubanakho ukwehla ngakumbi ukubonelela ngenqanaba lenkxaso kwi-37 yeedola.
Amaxesha ama-21 ama-EMA angaphantsi kwama-9 amaxesha e-EMA kwaye ingqekembe ithengisa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini kumgama othetha ukuba uxinzelelo lwabathengi luyanda. Ixesha lesalathiso soMbane oManyeneyo lingaphantsi kwamanqanaba angama-14 kunye nemigca yemiqondiso ekhombe ezantsi ukubonisa umqondiso wentengiso onokubuyela umva. Kwimeko apho abathengisi babenako ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 70 kunye nesibane sezibane zemihla ngemihla ezingaphantsi kwenqanaba, ixabiso lingehla ngakumbi ukuvavanya i-37 kunye ne-31 yenqanaba lenkxaso. Ukungakwazi ukophula inqanaba lenkxaso ye- $ 27, imeko yokuqhubela phambili inokuqhubeka nokujolisa kwinqanaba lokumelana ne- $ 37, $ 41 kunye ne- $ 44.
Intshukumo yexabiso le-BNBUSD yenze ishaneli enyukayo kwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso ngoku lihamba liye kumgca wokuhamba osezantsi wesitishi. Amaxesha ali-9 angaphezulu kwamaxesha angama-21 e-EMA kwaye ithengiswa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini ezibonisa ukonyuka komfutho weenkunzi.
I-BNBUSD 4 itshathi yeeyure, ngoDisemba 31
Ixesha lesalathiso se-RSI 14 likumanqanaba ama-0 kwaye imigca yemiqondiso iyagoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-NZD / i-USD ikwiPhezulu yokuHamba, ifikelela kuMmandla oThengisiweyo ongaphezulu kweNqanaba 0.7200
I-NZD / i-USD yeXabiso kwiXesha elide leNqanaba: Bullish
I-Kiwi iqhubekile nokunyuka kwayo. Esi sibini siwele kwinqanaba le-0.7000 kodwa saphinda saqala senyuka ngokukhawuleza. Kwi-uptrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Isibini se-NZD / USD siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci kunye nokubuyela umva.
I-Kiwi inyukele kwinqanaba lama-70 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba esi sibini sikwingingqi ethengiweyo yemarike. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zijike phezulu zibonisa umgaqo ophezulu.
I-NZD / i-USD yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini se-NZD / USD siqhubeke ngaphezulu emva kokuwa kwinqanaba le-0.7083. NgoDisemba 27 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye i-61.8% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci. Eli linqanaba eliphezulu le-0.7207.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ngaphezulu. Ibonisa ukuba isibini sikwi-uptrend. I-Kiwi ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Kwakhona, esi sibini sifikelele kwingingqi ethe kratya yentengiso.
Isibini se-NZD / USD sikwihambo ephezulu. I-Kiwi inyuke yaya kwinqanaba le-0.7189 kodwa ijongene nokuchasana kwinqanaba eliphezulu kutshanje. Kuba i-RSI ingaphezulu kwama-70, isibini esiya phezulu siyathandabuza.